Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Tia Miaraka Amin’ny Namany?
Mahazo namana tena tia anao ianao rehefa mivory. Tsy hoe olona mifankafantatra fotsiny mantsy ny mpiara-mivory, fa mpinamana be mihitsy. Miara-miala voly izahay indraindray. Inona no vokatr’izany? Lasa hitanay kokoa ny toetra tsaran’ny namanay, ka vao mainka izahay lasa mifankatia be. Mifanampy izahay rehefa misy olana. (Ohabolana 17:17) Miaraka amin’ny olon-drehetra eo anivon’ny fiangonanay izahay, satria tena ‘mifampiahy.’—1 Korintianina 12:25, 26.